Ra iisal wasaraha Xilgaarsiinta oo la kulamay Gudiga Saraakiisha Bad baado Qaran | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ra iisal wasaraha Xilgaarsiinta oo la kulamay Gudiga Saraakiisha Bad baado Qaran
Ra iisal wasaraha Xilgaarsiinta oo la kulamay Gudiga Saraakiisha Bad baado Qaran
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan kulan gaar ah la qaato saraakiishii kasoo horjeestay mudo kororsiga dowlada Soomaaliya ay ka laabatay.
Sida aan wararka ku helnay Rooble iyo guddi ay iska soo dhax magacaabeen saraakiishan ayaa kawada hadlaya sidii loo dhameyn lahaa xiisadii ka dhalatay mudo kororsiga ayna ciidamada dib ugu laaban lahaayeen goobihii ay ka yimaadeen.
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya oo dhawaan lagu wareejiyay howlaha doorashada iyo amaanka ayaa kulamo la qaatay qaar kamid ah musharaxiinta mucaaradka kuwaa uu kala hadlay sidii loo dejin lahaa xiisada Muqdisho .
Rooble ayaana dadaal badan ku bixinaya sidii magaalada Muqdisho looga saari lahaa ciidamada taabacsan mucaaradka kuwaa oo dhankooda ka wal walsan hadii ay laabtaan in aargoosi kala kulmaan saraakiisha iyo madaxda dowlada.
Saraakiisha hogaamineysay ciidamadii Muqdisho kula dagaalamay kuwa dowlada fedeeraalka Soomaaliya ayaa shir ay yeesheen ayey soo saareen qodobo ay shuruud kaga dhigeen in ay ka baxaan magaalada kuna laabtaan furumaha dagaalka.
Qodobada kasoo baxay shirka Saraakiisha ayaa waxaa kamid ahaa
In Xukuumadda Rooble ay ka laabato go’aankii ay Ciidanka Muddo korarsiga kasoo horjeeda ay ugu yeertay Maleeshiyaad oo ay sheegaan in ay yihiin Ciidanka Qaranka.
In Taliyeyaasha sare ee ciidamada dowlada la badalo maadaama rag is dagaalamay aysan isku talin karin si looga fogaado in la beegsado ciidamada muddo kororsiga diidanaa.
In aan Ciidamada muddo korarsiga diiday aan laga jari karin Mushaaraadkooda maadaama ay Qaranka ka badbaadiyeen.
Inaan la beegsan karin Saraakiisha iyo Ciidamadaas haddi ay joogan gudaha magaaladda iyo bannaankeeda.
in Ciidamada Badbaado Qaran ay goobahooda joogi doonnaan amniga xaafaddahaasna ay sugi doonnaan inta ay ka kala cadaaneyso in Rooble uu ku shaqeynaayo fekerkii Farmaajo iyo inuu yahay masuul u madax banaan go’aanadiisa.
6-Haddii ciidamada badbaado Qaran uu weerar uga yimaado dhinaca Ciidanka Farmaajo taabacsana waxay ku qasbanaan doonaan iney isdifaacaan.
Previous articleTaliyaha qaybta gobolka Karkaar oo gaadiidlaydda ku wargeliyay in hakad la geliyay Isticmaalka wadadaasi oo Biyo gooyeen
Next articleDowlada Etoobiya oo Xarunta Ciidamada Badda maanta hirgalisay
Innaa Lillaahi Wa Inaa Ileyhi Raajicuun, Innaa Lillaahi Wa Inaa Ileyhi Raajicuun Waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskiisa uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh...
30 Sano kadib maanta oo kale markii Xukunka laga tuuray Siyaad...
Issimadda iyo Nabadoonadda Puntland ayaa si wadajir ah u soo Dhaweeyey...
Wasiirka arrimaha dibadda Iran oo cafis weydiistay qoyska Qasem Soleimani...
Shirka Dhuusamareeb oi Rajo Wanaagsan yeeshay
Musharaxiinta durba bilaabay ololaha doorashada uu ka mid yahay ...
Ramla Cali oo Soomaaliya ku mataleysa ciyaaraha Feerka Olombikada Adduunka
Mohamed Abdullahi Mohamed - July 3, 2021 0